Facebook လေးပွတ်ရင်း အလုပ်လျှောက်ကြမယ် - Ammon | HR Outsourcing Services
Facebook လေးပွတ်ရင်း အလုပ်လျှောက်ကြမယ်
Facebook လေးပွတ်ရင်း အလုပ်လျှောက်ကြမယ် ❓👨‍💼
📣 လစာကောင်းတဲ့ အလုပ်တွေကို Facebook မှာဘယ်လိုရှာမလဲ ❓
📣 ညီလေးတို့ ညီမလေးတို့ ရဲ့ အိမ် ၊ မြို့နယ် အနီးအနား မှာ ခေါ်ယူနေသော အလုပ်တွေကို Facebook ကနေ ကြည့်လို့ရမည့် နည်းများကို သိချင်ပါသလား ❓
📣 Part Time / Freelance အလုပ်တွေ ဘယ်မှာ ကြည့်ရမလဲ ❓
📣 ကိုက်ညီတဲ့ Position တွေ ရှိတိုင်း Facebook Noti အသိပေးအောင် ဘယ်လို လုပ်ထားရမလဲ ❓
📣 Facebook Jobs တော့ ကြည့်တတ်ပါရဲ့ မသက်ဆိုင်သော ရာထူး တွေပဲ တွေ့နေရတယ် ဆိုရင် လည်း အသုံးမဝင်ပါဘူး။ 🤷‍♀️
Facebook Job Features ကို အကျိူးရှိရှိ အသုံးပြု ပြုလုပ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်ခဗျ။ 👇
1. Write Job in Search Bar 🔎
Mobile ဖုန်း အသုံးပြုပါက Facebook search bar တွင် Job ဟုရှာပါ။ Jobs Nearby တွေ့ပါက See All သို့ နှိပ်ပြီး အလုပ်များအား ရှာဖွေနိုင်ပါပြီ။Computer, Desktop Browser Version သုံးပါက www.facebook.com/jobs သို့ ဝင်ပါ။
2. Read JD & Apply Job 👨‍💻
Companyများမှ ခေါ်ယူနေသော အလုပ်များကို စတင် ကြည့်ရှု့နိုင်ပါပြီ။ လက်ရှိ နေထိုင်ရာမြို့ အလိုက် ခေါ်ယူနေသောအလုပ်များ ၊ Salary ၊ ရာထူး နယ်ပယ် အမျိူးအစားများစွာ ရှာဖွေလို့ရပါတယ်။ စိတ်ကြိုက်အလုပ်တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ Apply ကိုနှိပ်ကာ CV attach တွဲပြီး လျှောက်ထားနိုင်ပါပြီ။
ဒီမှာ တစ်ခုပြောစရာရှိတာက Facebook Jobs မှာ အသုံးပြုသူ ၏ Account တွင်ဖြည့်ထားသော Data များကို ယူတာကြောင့် နာမည်အရင်း မဖော်ပြထားခြင်း ၊ Education အထောက်အထား မပြည့်စုံခြင်း ၊ Working Experience များ မမှန်ခြင်းတို့ကြောင့် Recruiter များအနေနဲ့ Application Form ဖတ်ရတာမှာ အခက်အခဲဖြစ်ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် Facebook Jobs က အလုပ်လျှောက်မယ်ဆိုရင် FB Application Form ဖြင့် လက်ခံမခံ ကြည့်ပေးပါ။ အလုပ်ခေါ်စာ အများစုမှာတော့ CV တင်နိုင်မည့် email နှင့် website link များကို ရေးထားတတ်ကြပါတယ်။
3. Apply Jobs Near Your Home! 🏠
အိမ်နဲ့ နီးနီးနားနား မှာပဲ အလုပ် လုပ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက် Facebook Jobs မှာ အလုပ်ခေါ်စာများ ကို သီးသန့် ရွေးချယ်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။ ရွေးချယ်ပုံကတော့ Myanmar အားနှိပ်၍ Map ပေါ်တွင် Location ရွေးချယ်ခြင်း ၊ Radius တွင်နှိပ်၍ နေရာ ချုံ့ခြင်း ချဲ့ခြင်းများ အား ရွေးချယ်ထားလို့ရပါတယ်။
4.Get Noti for Future Opportunities ❗
လျှောက်ထား လိုသည့် ရာထူး လုပ်ငန်း နယ်ပယ် များအား မဖြစ်မနေ ရွေးချယ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ မရွေးချယ်ထားပါက Facebook ပေါ်မှာ ခေါ်သမျှ အလုပ်တိုင်း Noti တက်နေပါလိမ့်မယ်။
မိမိနှင့် ကိုက်ညီသော အလုပ်များခေါ်တိုင်း Facebook ပေါ် တက်နေအောင် Get Notification အား ဖွင့်ထားပေးပါ။
Happy Thingyan Festival & Myanmar’s New Year 2021
The important of Payroll Outsourcing in Post COVID Pandemic in Myanmar
Review & Check HR Auditing Administration Service